လှိုင်ရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ | iMyanmarHouse.com
1 သိန္း မွ2သိန္း ထိ လှိုင်မြို့နယ်ရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ
လှိုင် #သုခ (၅၂)လမ်းသွယ်ရှိ (၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ) (၂)လွှာ တိုက်ခန်း အငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19770576 အတွက် ေကေကအက်ိဳးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှိုင် #သုခလမ်းသွယ် (၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ) အိပ်ခန်း(၁)ခန်းဖွဲ့ပြီး (၃)လွှာတိုက်ခန်း ငှားပါမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19721211 အတွက် ေကေကအက်ိဳးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပါရမီစိန်ဂေဟာနီး တိုက်ခန်း ငှားမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19688071 အတွက် Win Myanmar Real Estate Angecy Co. Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19677587 အတွက် Min Mahar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19662603 အတွက် Min Mahar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
MICT. PARK. အနီးတိုက်ခန်းအငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19623447 အတွက် အင်ကြင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှိုင်မြို့နယ် (၁၂ခြဲx၅၀) တိုက်ခန်းငှားမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19620614 အတွက် ေကေကအက်ိဳးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
25x50 တိုက်ခန်း ငွားမည္။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19620583 အတွက် ေကေကအက်ိဳးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်